Lorcaserin (Belviq) budada (616202-92-7) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Xabbad dufan leh / Lorcaserin budada
Rating: SKU: 616202-92-7. Category: Xabbad dufan leh
AASraw waxay ku jirtaa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ee Lorcaserin (Belviq) budada (616202-92-7), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Soo saarida daroogo maareyn ah oo ammaan ah oo daroogada ah waa hawl adag. Isku dayadii hore waxay la yimaadeen waxyeelo dhowr ah sida dhaawaca wadnaha. Nasiib wanaag, daraasad cusub ayaa sheegeysa in kiniiniga miisaanka lorcaserin uu kaa caawin karo inaad iska daadato miisaan xad dhaaf ah adigoon ku bixin karin caafimaadkaaga wadnahaaga. Lorcaserin waa kiniin-kicinta xasaasiyadeed ee xasaasiga ah, taas oo ay ansaxisay FDA in 2012. Laakiin waa maxay lorcaserin? Waa hagaag, hoosta waa sharaxaad qoto dheer ee daroogada, dhismaha kiimikada iyo guryaha, isticmaalka, qiyaasta, taxaddarrada, iyo wax kaloo badan.
Magaca Product: Lorcaserin / BELVIQ (lorcaserin hydrochloride)
Fiidiyowga budada ah ee Lorcaserin (Belviq)
I.Lorcaserin (Belviq) budada Calaamadaha aasaasiga ah:
Name: Lorcaserin (Belviq) budada
Qaaciddada Molecular: C11H14ClN
Miisaanka kelli: 195.692
Dhibcaha Biyaha: 212 ° C
Color: Caddaan cad oo budada ah
Hoos waxaa ku qoran qaabka kiimikada ee lorcaserin ee 3-D.
Qalabka Kiimikada ee Lorcaserin (belviq) (CAS 616202-92-7)
Hoos waxaa ku qoran sifooyinka kiimikada ee la soo koobay ee Lorcaserin (belviq); waxaa lagu soo bandhigay jadwalka hoose si aad u jaleecdo.
Magaca Hantida Qiimaha hantida
Tirinta Qaybaha Dhiirigelinta ah 1
Tirinta Bond Stereocenter Bond 0
Tirinta Bond Stereocenter Ball 0
Tirakoobka Atom Stereocenter ee aan la aqoon 0
Tirinta Atom Stereocenter Count 1
Tirada Nidaamka Atomka 13
Kharashka rasmiga ah 0
Isku dhexdaada waa mid la mid ah True
Buuxa Mass 195.081 g / mol
Monoisotopic Mass 195.081 g / mol
Meelaha Aagga Fudud ee Foollada 12 A ^ 2
Tirinta Bonded Rabshadaha 0
Tirada Hydrogada Bond Acceptor 1
Tirada Deeqda Hydrogo Bond 1
Miisaanka kelli 195.69 g / mol
Faahfaahin sahlan ee budada Lorcaserin HCL
Lorcaserin (Belviq) waa kiniin xakameeya cuntada oo xakameynaya Arena Pharmaceuticals. Waxay ka tirsan tahay nooc daroogo ah oo loo yaqaan 'serotonin reseptor agonists'. Waxaa loogu talagalay inay kaa caawiso inaad dareento inaad buuxdo ka dib markaad cuntid cunto ka yar. Waxay xakameysaa rabitaanka cuntada adoo kicinaya 5-HT2C xayawaanka, kuwaas oo ah noocyada serotonin reseptors ee gobolka ee maskaxda (hypothalamus) ee xakameynaya rabitaanka cuntada. Marka ay jimicsigaaga u muujiyaan inay buuxsamaan, waxaad cuni doontaa cunto yar, sidaas awgeedna miisaankiisu hoos u dhaco muddada dheer.
Belviq, oo magaciisa kiimikada ah (R) -8-chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3 - benzazepine hydrochloride hemihydrate, waxaa loola jeedaa in lagu qaato hadal ahaan. Miisaanka maaddada molecular waa 241.16 g / mol, iyo caanaha loo yaqaan 'empirical formula' waa C11H15Cl2N • 0.5H2O. Qaab-dhismeedka qaab-dhismeedkiisu waa sidan:
Xakamaynta Lorcaserin hydrochloride hemihydrate ee biyaha ayaa ka sarreysa 400 mg / mL. Kiniiniga Belviq wuxuu leeyahay 10.4 milligram oo ah crystalline lorcaserin hydrochloride hemihydrate (caddaan ah budo cad-cad), taas oo u dhiganta 10.0 milligram anhydrous lorcaserin hydrochloride. Waxa kale oo ku jira maaddooyin kale, oo ay ku jiraan magnesium stearate NF, talc USP, FD & C Blue # 2 aluminium haro, titanium dioxide USP, polyetylen glycol NF, polyvinyl aalk USP, colloidal silicon dioxide NF, croscarmellose sodium NF, silicified microcrystalline cellulose iyo hydroxypropyl cellulose NF.
Tallaabooyinka qaabka Lorcaserin
Marka la eego shuruudaha hagidda maamulka cuntada iyo daroogada (2007), Lorcaserin ayaa awood u leh inuu ka caawiyo dadka qaangaarka ah in ay ku guulaystaan ​​miisaan lumis ah. Daawada miisankani miisaanka ayaa la sheegay in ay si fiican u shaqeyneyso marka la isku dayo dhaqdhaqaaqa jidhka oo kordhay iyo sidoo kale cunto yar-yar oo kalooriye ah. Waxay si weyn u caawin kartaa maaraynta culeyska joogtada ah, gaar ahaan dadka aad u culus (ugu yaraan 27 kg / m2), ama cayil (BMI) ugu yaraan 30 kg / m2). Daawadani waxay sidoo kale ka caawin kartaa kuwa leh hal ama in ka badan mawduucyo culus, sida nooca sonkorowga 2, dyslipidemia, ama hypertension.
Lorcaserin waa kiniin-kiniin-kiniin-cune-qabe-qabe ah oo wax-qabad u leh 5-HT2C Xasaasiyuhu wuxuu ku jiraa hypothalamus leh doorasho doorasho ah oo shan iyo toban jeer ah oo xiiso badan loogu talagalay 5-HT2C soo dhaweeyayaasha marka loo eego 5-HT2A iyo xakamaynta 100 wakhtiyada doorashada sare ee 5-HT2C soo dhaweeyayaasha marka loo eego 5-HT2B.
5-HT2C qabtayaasha waxay ku yaalliin gaar ahaan maskaxda aadanaha waxaana laga heli karaa thalamus, hypothalamus, kiliyaha, hippocampus, choroid plexus, cerebellum, iyo amygdala. Kicinta 5-HT2C qaboojiyeyaasha ee hypothalamus waxay dhaqaajineysaa wax soo saarka POMC (proopiomelanocortin) sidaas darteedna waxay kor u qaadaysaa yareynta miisaanka iyada oo loo marayo dhereg. Doodan waxaa taageeray tijaabooyin caafimaad oo la xaqiijiyay iyo daraasado kale oo cilmi baaris ah. In kasta oo sida caadiga ah loo maleeyo in qabtayaasha 5-HT2C ay gacan ka geystaan ​​nidaaminta rabitaanka cuntada, dheecaanka dheecaanka jirka, iyo niyadda, habka saxda ah ee wax looga qabanayo nidaamka rabitaanka cuntada lama yaqaan.
Qalabeyn EC50 [nM] Ki[nM]
Isticmaal budada Lorcaserin HCL
Haddii aan tixgelineyno dhabta Lorcaserin in ay dib u eegaan halkaas, markaa tani waxay u badan tahay kaniinka miisaanka ugu fiican ee suuqa maanta. Dadka cayilan qaarkood, sida, kuwa haysta xaalado caafimaad oo miisaanka la xidhiidha ama kuwa caanaha ah ayaa si weyn uga faa'iideysan kara sheygan.
Marka la isticmaalo barnaamijka tababarka dhakhtar-ogolaanshaha, barnaamijka cunto-yar-yar-yar, iyo isbedelka hab-nololeedka, Lorcaserin ayaa ka caawin kara inuu sameeyo wax badan oo ka badan miisaanka lumay - waxay caawin kartaa yareynta khatarta caafimaadka ee la xiriirta cayilka, oo ay ku jiraan cadaadis dhiig oo sarreeya, sonkorow, cudur wadne, iyo geeri hore.
Sida laga soo xigtay Xarunta Xakamaynta Cudurada, luminta 5 10 boqolkiiba miisaanka guud ee jirka ayaa soo bandhigi kara faa'iidooyinka caafimaadka sida horumarinta sonkorta dhiigga, baruurta dhiigga, iyo cadaadiska dhiigga.
Qiyaasta daawada Lorcaserin HCL
Dadka waaweyn waxay u maleynayaan inay qaataan laba kiniin ah maalintiiba. Sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad qaadato kaniiniyada 60 bishiiba. Marka loo eego FDA, waa in qofku isticmaalo daroogada inta lagu guda jiro noloshiisa / noloshiisa si uu u sii wato miisaan caafimaad leh.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in natiijooyinka wanaagsan ay tahay in la arko todobaadyada XNUM. Haddii aanad lumin ugu yaraan 12 boqolkiiba miisaankaaga aasaasiga ah markaa, waxaa lagugula talinayaa inaad joojiso isticmaalka kiniinka. Xitaa isticmaalka joogtada ah, waxa ay u badantahay in aad ku guuleysato oo aad u sii joogtid miisaankaaga macnaha leh ee lumista lumista.
Lorcaserin HCL taxadarka
Way fiicantahay in la xasuusto in xirfadlahaaga daryeelka caafimaad uu qoray dawadan maxaa yeelay waxay xukumeen in faa'iidada aad heshaa ay ka sareyso halista waxyeelooyinka soo raaca. Inta badan dadka qaata daawadan ma muujiyaan waxyeelo daran.
Kahor intaadan qaadan lorcaserin, u sheeg farmasiilahaaga ama dhakhtarkaaga inaad xasaasiyad ku leedahay daroogada; ama inaad xasaasiyad kale leedahay Lorcaserin waxaa ku jira maaddooyin aan firfircooneyn oo u horseedi kara falcelin xasaasiyadeed ama arrimo kale. Weydiiso farmashiistaha inuu ku siiyo faahfaahin dheeraad ah.
Kahor qaadashada dawadan, u sheeg farmasiilahaaga ama dhakhtarkaaga taariikhda caafimaad, gaar ahaan dhibaatooyinka kelyaha, sonkorowga, dhibaatada beerka, cudurada wadnaha (oo ay ku jiraan wadnaha wadnaha, wadnaha wadnaha, wadnaha oo si tartiib ah u garaaca, wadnaha oo istaaga) kacsiga xanuunka / daba dheeraada ee ragga (oo ay kujiraan guska oo xumaaday, cudurka Peyronie, myeloma badan, sickle cell anemia, leukemia).
Kiniiniga xakamaynta cuntada ayaa kaa dhigi kara inaad gaabiso fikirkaaga ama wareerto. Marijuana ama aalkolo ayaa ka sii dari kara saameyntan. Ha u isticmaalin mashiin, wadid, ama ha sameyn wax kasta oo u baahan feejignaan illaa aad si taxaddar leh u qaban karto. Xaddid cabitaanka aalkolada ah oo la hadal dhakhtarkaaga haddii aad isticmaaleyso marijuana.
Haddii aad marayso qalliin, waa caqli-gal inaad u sheegto dhakhtarkaaga ilkaha ama dhakhtarkaaga dhammaan alaabooyinka aad qaadato (oo ay ku jiraan dawooyinka aan dhakhtar qorin, daawooyinka laguu qoro, iyo daawooyinka laguu qoro).
Haddii aad la nooshahay cudurka macaanka, kaniinkan miisaankaaga oo yaraada wuxuu saameyn ku yeelan karaa sonkorta dhiiggaaga. Hubso inaad hubiso heerka sonkorta dhiiggaaga xilliyada caadiga ah sida lagu taliyay oo aad ula wadaagto natiijooyinka dhakhtarkaaga. U sheeg dhakhtarkaaga haddii aad leedahay calaamado sonkor dhiig oo hooseeya. Xirfadlahaaga daryeelka caafimaad wuxuu ubaahan karaa inuu hagaajiyo barnaamijka jimicsigaaga, cuntadaada ama daawada sonkorowga.
Daawadani waa in aan la qaadanin inta lagu jiro uurka maxaa yeelay waxay dhaawici kartaa ilmaha aan dhalan. Weydii dhakhtarkaaga wixii ku saabsan codsashada qaababka lagu kalsoonaan karo ee ka-hortagga uurka. Haddii aad uur leedahay ama aad uur leedahay, isla markiiba u sheeg xirfadlahaaga daryeelka caafimaadka.
Illaa iyo hadda, lama oga in daroogadani u gudubto caanaha naaska. Si looga hortago suurtagalnimada halista cunugga, naasnuujinta markii la isticmaalayo daawadan laguma talinayo. Hubso inaad la tashato dhakhtarkaaga ka hor intaadan naas nuujin.
Si taxaddar leh u akhri waraaqda Macluumaadka Isticmaalaha haddii aad ka heli karto dhakhtarkaaga ka hor intaadan bilaabin isticmaalka lorcaserin iyo wakhti kasta oo aad dib u buuxiso. Haddii ay dhacdo inaad su'aal qabtid, weydii farmashiistahaaga ama takhtarkaaga.
Kaniiniga kaniinka ah ee kaniiniga cunaha ku cun cun ama ha cunin sida uu ku faray farmashiistahaaga, badiyaa laba jeer maalintii. Isticmaal dawadan si joogto ah si aad uga faa'iidaysato. Si lagaaga caawiyo inaad xasuusato, qaado kaniiniga waqti isku mid ah maalin kasta.
Lorcaserin waa daroogada qaab-dhaqameedka. Ha kicinin qiyaasta ama kiniinkan si ka badan inta loo qoro. Xaaladda aad heysid waxaa laga yaabaa inaanay wax horumarin degdeg ah sameynin, iyo khatarta ah in waxyeelo soo gaarto.
Isdhexgalka daroogada daran waxaa dhici karta marka daawooyinka gaarka ah loo isticmaalo kiniiniga lorcaserin. U sheeg dhakhtarkaaga dhammaan daawooyinka aad hadda isticmaashid, iyo dawooyinka kale ee aad bilaabayso ama joojiso isticmaalka.
Lorcaserin kaniiniga miisaanka looma oggola isticmaalka dadka ka yar da'da 18.
Sideen u qaataa budada Lorcaserin HCL?
Ha calalin, jebin, ama jebin kiniin sii-dheereyn ah. Kaliya u liqo.
Cunto-qabtaha Lorcaserin waa qayb ka mid ah barnaamijka daaweynta oo dhammaystiran oo ay tahay in lagu daro jimicsi, maaraynta miisaanka, cuntada, iyo markasta tijaabi sonkorta dhiigaaga. Raac jadwalkaaga daawada, nafaqada, iyo jimicsiga aad u adag.
Ku kaydi dawooyinka heerkulka qolka ka fog kuleylka iyo qoyaanka.
Hayso diiwaanka qaddarka daawooyinka loo isticmaalo dhammaan dhalooyinka. Kiniiniga lafdhabarka ee Lorcaserin waa daroogo xadgudub ah, waana in aad had iyo jeer ogaatid haddii qof uu isticmaalayo daawadaada adigoon rijeeto qorin ama aan sax ahayn.
Marna ha la wadaagin daawada lorcaserin cid kale. Daawada ku hay meel aan cid kale heli karin.
Maxaa dhacaya haddii aad seegto qiyaasta Lorcaserin?
Si fudud u qaado qiyaasta la seegay isla markiiba aad xasuusato. Waa inaad ka gudubtaa qiyaasta la seegay haddii waqtiga qiyaasta qorshaysan ee ku dhow yahay. Ha qaadan qadar dheeraad ah si aad u sameysid qiyaasta la seegay.
Maxaa dhacaya haddii aad ka badan tahay Lorcaserin?
Raadi gargaar caafimaad oo degdeg ah ama la xiriir khadka caawinta sunta ee 1-800-222-1222.
Maxaan iska ilaaliyaa qaadashada inta lorcaserin ah?
Ha qaadan wax kale oo ka-soo-gaaban ama alaabada culus-miisaanka oo aan daawo lahayn adigoon talo bixin ka helin dhakhtarkaaga. Sidoo kale, ha qaadan dawooyinka qabowga ama qufaca marka qaadashada kiniiniga lorcaserin.
Daawooyinka kale ee saameyn kara lorcaserin?
Daawooyinka soo socda ayaa saameyn ku yeelan kara sida lorcaserin u shaqeeyo:
“Triptan” oo ah dawooyinka madax xanuunka dhanjafka – sida Maxalt, Zomig almotriptan, rizatriptan, sumatriptan, frovatriptan, zolmitriptan, Imitrex, iyo kuwa kale.
nooc kasta oo ah antidepressant
erectile dysfunctiondrugs - Levitra, Viagra avanafil, Cialis, sildenafil, tadalafil, iyo kuwa kale;
tryptophan (sidoo kale loo yaqaan L-tryptophan);
qufac ama dawooyin qabow oo ka kooban dextromethorphan; ama
daawooyinka lagu daaweeyo cudurka maskaxda, niyadda ama khalkhalka walaaca.
Liistada kor ku xusan ma aha mid dhamaystiran. Daawooyinka kale waxay saameyn karaan lorcaserin, mana aha dhammaan isdhexgalka suurtogalka ah ee lagu qoray liiska dawadan.
Warbixinnada BBC ee Amniga iyo Waxtarka ee Lorcaserin HCL (CAS 616202-92-7)
Waxaa jira warar badan oo BBC ah oo ku saabsan Lorcaserin oo ku saabsan ma aha oo kaliya waxtarnimada, laakiin sidoo kale ammaanka daawada. Sida laga soo xigtay BBC, daraasad dhowaan lagu daabacay wargeyska New England Journal of Medicine, waxay muujinaysaa in dadka isticmaala kiniiniga cuntada qabta lorcaserin kiniiniga lumay celceliska qiyaastii 8.8lb (4kg) mudo yar oo ah saddex sano iyo badh. Natiijooyinka daraasaddan waxay xaqiijiyeen in lorcaserin uu shaki ku jiro kaniiniga miisaanka ugu fiican.
Warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in daawada ay tahay tan ay ka shaqeyneyso xakameynta cunto xumida, ha u dhigin dadka isticmaala khatarta sare ee wadnaha wadnaha. Daraasadan la daabacay ayaa raacday buurnida 12,000 ama bukaanka culus ee maraykanka ka badan bilaha 40.
Saddex sano iyo badh ka dib, dadka waaweyn ee qaata lorcaserin ayaa saddex jeer ka badan laga yaabo in aysan hoos u dhicin shan ilaa toban boqolkiiba oo ka mid ah jirkooda oo ka badan kuwa qaata kiniinada, sida uu sheegay mid ka mid ah cilmibaadheyaasha hormoodka ah ee daraasadda, Dr. Erin Bohula.
Tijaabooyinka lagu sameeyay qalabka wadnaha ayaa muujin waayey khilaafaad weyn marka la barbar dhigo qalabka wadnaha ee kuwa qaadanaya placebo. Iyadoo maskaxda ku haysa in tani ay tahay arrinka ugu muhiimsan marka ay timaado nabdoonaanta kiniiniyada kale ee waxtarka leh, lorcaserin waxay noqon kartaa kiniinka lumay miisaanka ugu fiican.
Dadka qaangaarka ah ee daawada qaata waxay sidoo kale qatar yar ugu jireen nooca 2aad ee sonkorowga. Kiniiniga wuxuu ku kacaa qiyaastii £ 155-225 ($ 220-290) bishiiba qadarka Mareykanka. Lorcaserin waxay bixisaa bedel aad u fiican oo loogu talagalay hababka miisaanka yareynta miisaanka sida qalliinka caloosha iyo kuwa kale.
Warbixin kale oo ay soo saartay BBC-du waxay soo bandhigtay daraasad ay sameeyeen cilmi-baarayaal ka tirsan mac-hadka Rowett ee jaamacadda Aberdeen oo daraasad ku sameeyay rabitaanka cuntada. Saynisyahannadu waxay sheegeen in cilmi-baaristooda ku saabsan rabitaanka cuntada ay ku hoggaamiyeen qayb maskaxda ka mid ah.
Waxay ogaadeen in ay saameyn ku yeesheen unugyada gaarka ah ee daawooyinka ay awoodeen inay hoos u dhigaan cuntada. Maadaama lorcaserin uu u shaqeeyo nidaamkan, natiijooyinka daraasadani maaha oo kaliya albaabada u furay daawooyinka cusub sida lorcaserin laakiin waxay xoojiyeen waxa khubarada ka aaminsan yahiin lorcaserin-ammaankeeda iyo waxtarkeeda.
Daawada budada ah
Synephrine budada HCL
Coenzyme Q10 budada ah
Fosfatidylserine (PS) budada
Xabbad dufan leh (16)
Qaar kale waxay (69)